ကြည်ဇော်အေး ● မျက်မြင်သက်သေ | MoeMaKa Burmese News & Media
Log In USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ HOME, 124, 5th Fl., 57th Street, Pazundaung TSP, Yangon, Myanmar စာတိုက်သေတ္တာ (၈၂၅)၊ ရန်ကုန်စာတိုက်ကြီး။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) မာတိကာ
ကြည်ဇော်အေး ● မျက်မြင်သက်သေ
ကြည့်မြင်တိုင်များ သွားမလုပ်နဲ့ ကိုစောညိန်းတောင် ရိုက်သတ်တာ
ကန့်ဘလူများ သွားမလုပ်နဲ့ သိပ္ပံမောင်ဝတောင် သတ်ပစ်တာ
ဖားကန့်များ သွားမလုပ်နဲ့ ပိုင်သလည်း အသတ်ခံရတာ
ဖော်ဝေးတွေ မောင်ချောနွယ်တွေ မြို့မငြိမ်းတွေ ဒေါ်မန္တလာမြင့်တွေ
သူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှ အကုန်ချွတ်ပေးထားခဲ့ရတာ ။
၁၆ မတ်လ ၂ဝ၁၇
သင့်အကြောင်း သင့်လုပ်ငန်း ကြော်ငြာ သည်နေရာမှာ ကြော်ငြာနိုင်ပါပြီ ထပ်ဆင့်ဝေမျှပေးရန် ...EmailTweetPrintLike this:Like Loading...
Tags: ကြည်ဇော်အေးအလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ကဗျာ	စာဖတ်သူတွေရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့် Cancel reply
ကိုအောင်မှိုင်း - ကျောချမှ ဓါးပြမှန်းသိ	ဗိုလ်ထက်မင်း - အမျိုးသားလုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်ခံရပြီဆိုရင် - ၃	ကာတွန်း မင်းထက်လူ ● အစီအစဉ်အပြည့်နဲ့ လွှတ်တော်	ကာတွန်း ကိုခေတ် ● လူငယ်သဘာဝနဲ့ မတော်တဆ	ကာတွန်း ညီထွေး ● မြန်မာအိုင်ထော	အောင်သဇင် ● မျက်နှာမရ ခြေထောက်ဘဲရမယ့် မင်းအောင်လှိုင်	ဗိုလ်ထက်မင်း - အမျိုးသားလုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်ခံရပြီဆိုရင် - ၂	အောင်သဇင် - သေခါနီး မီးထတောက်တာလား	မောင်မောင်စိုး ● နှင်းဆီနီနီအိပ်မက်များ - အပိုင်း (၁၉)	ကိုသန်းလွင် ● ပါးပေါ်ထောပတ်သုတ်သူများ	မိုးမခ Kindel Store
မိုးမခ လမ်းညွှန်မှာ သင့်လုပ်ငန်း ပါသလားHninn Si Phyu - နှင်းဆီဖြူ စာပေတိုက် Nann Oo - နန်းဦး စာပေ ဖြန့်ချိရေး Mya Thara Phyu Store - မြသရဖူ စတိုးနဲ့ ကုန်စုံဆိုင် HOME - House of Media & Entertainment U Win Tin & Collection of Articles (MoeMaKa) - ဦးဝင်းတင်နဲ့ ဆောင်းပါးများ (မိုးမခ) Burmese Monastery in UK Wun Zin E-Book Online - ၀န်ဇင်း၊ မြန်မာစာအုပ် အီးဘုတ်ဆိုင် Burmese Monastery in West Coast, USA ကုမုဒြာ ဂျာနယ် - KuMuDra News Journal Ryan Thaw, DDS - ဒေါက်တာမောင်မောင်သော် (သွားအထူးကု) အခြား ဖတ်စရာများမိုးမခမင်း (ကမာပုလဲ)
ညိုထက်ညို - ဆင်ဖမ်းသမား
ဘု ရား
မိုးမခမှာ အသစ်တင်တိုင်း သင့်အီးမေးထဲကို အရောက်ပို့မယ်။ Join 1,625 other subscribers
Email Address	Colorful People Memorial Place
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန်	နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန်
January 2017 (234)
October 2015 (356)
Twitter: moemakaကာတွန်း ကိုခေတ် ● လူငယ်သဘာဝနဲ့ မတော်တဆ https://t.co/qEdPx7M4RG https://t.co/vLjr9qWGHR about 13 hours ago ReplyRetweetFavoriteဒီလူည ● ည ရောင်းရန်ရှိသည် https://t.co/iPwiOQgCAi https://t.co/tS5BwCFwkx about 18 hours ago ReplyRetweetFavoriteဗိုလ်ထက်မင်း – အမျိုးသားလုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်ခံရပြီဆိုရင် – ၃ https://t.co/waBFIXjtZd https://t.co/FOYJvYxtT3 about 20 hours ago ReplyRetweetFavoriteကာတွန်း မင်းထက်လူ ● အစီအစဉ်အပြည့်နဲ့ လွှတ်တော် https://t.co/GfIOP98FDH https://t.co/mgrDSaGAYi about 21 hours ago ReplyRetweetFavoriteကိုသန်းလွင် ● ပါးပေါ်ထောပတ်သုတ်သူများ https://t.co/HifxCeRHmv https://t.co/HBtAVKZ8bX about 21 hours ago ReplyRetweetFavorite@moemaka ကြော်ငြာ … ကြော်ငြာ …	စာအုပ်မြင် ချစ်ခင်ကြပါစေ …	MoeMaKa Monthly MARCH 2017 ထွက်ပြန်ဘီ တဲ့.. မိုးမခမှာ ကြော်ငြာပါ
ဒီလို ကြော်ငြာချင်သလားBurmese Monastery in Central USA UMG School of IT , Yangon (သင်တန်းသား လက်ခံပြီ) Chit Ma Ma Salon - ချစ်မမ လှရိပ်မြုံ မိုးမခကို အိမ်အရောက် ပို့ပေးမည်
မိုးမခမာတိကာစဉ်	About MoeMaKa (71)
ခရီးသွား ဆောင်းပါး (44)
Maung Swan Yi (53)
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် (177)
ဇော်အောင် (မုံရွာ) (120)
အရှင်ဇ၀န (နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း) (58)
Ni July (22)
ကာတွန်း – အောင်မော် (105)
ကာတွန်း ၀င်းအောင် (32)
ကာတွန်း ATH (161)
ကာတွန်း ဇာနည်ဇော်ဝင်း (36)
ချမ်းမြ (မုိုးမခအထောက်တော်) (42)
သီဟ (စခန်းသစ်) (49)
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သချာင်္) (46)
Photo Essays (26)
မိုးမခကို ပေးတဲ့စာ (257)
ရေခြားမြေခြား မြန်မာများ (198)
သမိုင်းနဲ့ အစဉ်အလာ (885)
လူများ၊ ရုပ်ပုံလွှာများ (339)
ဖြစ်ရပ်များ၊ အမှတ်တရများ (180)
Cartoon Box (2,866)
Post was not sent - check your email addresses!	Email check failed, please try again	Sorry, your blog cannot share posts by email.	ကြော်ငြာရန် …Burmese Community Services (နယူးယောက်၊ ဘတ်ဖဲလိုးမြို့) Cheap Tickets Travel - ရွှေမြန်မာများအတွက် Rangoon Superstar - ရန်ကုန်စူပါစတား Mya Thara Phyu Store - မြသရဖူ စတိုးနဲ့ ကုန်စုံဆိုင် မိုးမခနဲ့ ပတ်သက်သမျှ မိုးမခ မတ်၊ ၂၀၁၇ ထွက်ပါပြီ
By admin မိုးမခ မတ်၊ ၂၀၁၇ ထွက်ပါပြီ (မတ် ၉ ၊ ၂၀၁၇)...Read more » မိုးမခ ဖေဖော်ဝါရီကို အိမ်အရောက် မှာယူနိုင်ပါပြီ
By admin မိုးမခ ဖေဖော်ဝါရီကို အိမ်အရောက် မှာယူနိုင်ပါပြီ (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၇ တရားမျှတဖို့ အတွက်...Read more » မိုးမခမဂ္ဂဇင်းကို မြန်မာပြည်အနှံ့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်
By admin မိုးမခမဂ္ဂဇင်းကို မြန်မာပြည်အနှံ့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ် (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၇ ၂၀၁၆...Read more » မိုးမခ နိုဝင်ဘာကို အိမ်အရောက် မှာယူပါ
By admin ” ကဗျာဖတ်ချင်ရင် မိုးမခမှာဖတ်ပါ စာဖတ်ချင်ရင် မိုးမခမှာဖတ်ပါ တရွေ့ရွေ့နဲ့ ရှေ့တန်းရောက်လာတဲ့ မဂ္ဂဇင်း .....Read more » သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စာကို အနည်းဆုံး ၁ ဒေါ်လာ လှူပြီး မိုးမခကို ကူညီပါ	Recent Commentsko zaw on ရွှေကူမေနှင်း – အမေရိကန်ပြည် အ၀င်ဂိတ်မှာ ပိတ်မိခြင်းNikolas Seleucus on ရွှေကူမေနှင်း – အမေရိကန်ပြည် အ၀င်ဂိတ်မှာ ပိတ်မိခြင်းaung ye kyaw on မဘသနဲ့ ၀ီရသူတို့က မြန်မာနောင်းသတင်းထောက် ကိုဆွေဝင်းကို တရားစွဲဟု ဆိုU U lin on မောင်မောင်စိုး ● တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီနှင့် မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေး (နိဂုံး)U U lin on ဗိုလ်ထက်မင်း – ၂၁ရာစု ပင်လုံညီလာခံကို စိန်ခေါ်လာကြခြင်း (အပိုင်း ၂)၊ နိဂုံးကဏ္ဍများအလိုက်Maung Swan Yi
သင်းလဲ့ဝင်း (Myanmar Now)
၂၁ ရာစု ပင်လုံ
ဖြိုးသီဟချို (Myanmar Now)